वालिङले अभ्यासको लागि मैदान पाएन ! - Khelpati
बिहिवार, माघ ८, २०७७ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा सहभागी भएको वालिङ नगरपालिकाले अभ्यासका लागि मैदान नपाएको गुनासो गरेको छ ।
महिला लिगका लागि काठमाडौं आईपुगेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले ४ दिन यता अभ्यासको लागि मैदान नपाएको गुनासो गरेको छ ।
वालिङ नगरपालिकाका मुख्य प्रशिक्षक दिलिप थापाले काठमाडौं आएपछि आफ्नो टोलीले अभ्यास गर्ने मैदान नपाएको र अभ्यास विहिन हुँदै प्रतियोगितामा सहभागी भएको बताए ।
‘काठमाडौं आएको ३ दिन यता बल टच भएको छैन । ट्रेनिङ गर्न मैदान भएन, हामीले खेल अघि कसरी अभ्यास गर्नु,’ विराटनगर महानगरपालिकासँग बराबरीमा रोकिएपछि प्रशिक्षक थापाले भने ।
बिहीबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा वालिङ विराटनगरसँग १–१ को बराबरीमा रोकियो । खेलको दोस्रो मिनेटमै वालिङको लागि स्ट्राइकर संझना शर्माले गोल गरेकी थिईन् । उनले कर्नरबाट आएको बललाई ब्याक हेडिङमा जाली चुमाईन् ।
पहिलो हाफमा औषत प्रदर्शन गरेको वालिङले दोस्रो हाफमा गोल ब्यहोर्न पुग्यो । विराटनगरका आशा कुमारीले खेलको ६८ मिनेटमा करिब २५ यार्डबाट प्रहार गरेको बल वालिङकी गोलरक्षक सावित्री किशनको पञ्जाबाट फुत्किदै गोल लाईन कटेको थियो ।
दोस्रो पटक प्रतियोगिता खेल्न काठमाडौं आईपुगेको वालिङ शुन्धारास्थित एक होटेलमा बसिरहेको छ ।
मैदान अभावकै कारण टुढिखेलमा अभ्यासको लागि जान लागेको वालिङ नगरपालिकालाई भने एन्फाले सो स्थानमा अभ्यास गर्न रोक लगाएको थियो ।
‘हामी त मैदान नपाएपछि टुढिखेल अभ्यासका लागि जाने योजनामा थियौं । तर एन्फाबाट त्यहाँ नजानु भने । तर, मैदान पनि पाएका छैनौं,’ प्रशिक्षक थापाले प्रतियोगितामा पाएको दुखेसो पोखे ।
यसैबीच वालिङले शुक्रबारको एक दिनको आराम पछिनै विभागीय त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । तर त्यस अघि पनि मैदान नपाउँदा उनले आफ्नो टिम सेट गर्न पाउने छैनन् र पुनः विना सेटको टोली लिएर मैदान छिर्नेछन् ।
‘अबको खेल आर्मीसँग छ । अभ्यास गर्ने स्थान छैन । यस्तो अवस्थामा विभागीय टिमसँग खेल्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘अबको खेलमा झन विदेशी खेलाडी पनि सहभागी हुन्छन् । उनिहरुको स्तर के हो ? कस्ता हुन् ? त्यो पनि थाहा छैन । अभ्यास गर्ने मैदान नपाए झन गाह्रो हुनेछ ।’
प्रतियोगितामा एक टोलीले ४ विदेशी खेलाडी राख्ने नियम रहेसँगै वालिङले ४ क्यामरुनको खेलाडी ल्याउने पक्का भएको छ । विराटनगरविरुद्ध तिन खेलाडीको नाम लिष्टमा रहेपनि उनिहरु उपलब्ध हुन सकेनन् । विराटनगरले भने ३ भारतीय खेलाडी प्लेईङ सेटमा खेलाएको थियो ।
यस्तै वालिङकी कप्तान सरस्वती हमालले बिना अभ्यास खेल्दा मसाज जाने र खेल्न गाह्रो हुने बताउँछिन् ।
‘अभ्यास गर्न नपाउँदा गाह्रो हुन्छ । मसल्समा समस्या पनि आउँछ,’ वालिङबाट करिब २६१ किलोमिटर बसयात्रा हुँदै काठमाडौं आई पुगेकी यू–१९ महिला फुटबल टोलीका सदस्य सरस्वतीले भनिन् ।
यता, एन्फा महिला कमिटी तथा प्रतियोगिता संयोजक पेमा लामा भने सहभागी टोलीका लागि तिन मैदान तयार भएको बताउँछिन् ।
‘सहभागी टोलीको अभ्यासका लागि मैदान तयारी गर्दैछु । हामीले पुलिस आर्मी र सशस्त्रको मैदान मिलाएका छौं । क्लबसम्म खबर नपुगेको होला,’ उनले सहजै आफ्नो कुरा टुंगाईन् ।